11 -ka Deeq -waxbarasho ee ugu sarreeya ee Cudurrada Awood -La'aanta 2022
11 Deeq waxbarasho oo sare oo loogu talagalay cudurada iswada
Waxaa jira deeqo waxbarasho oo loogu talagalay cudurrada isdifaaca jirka, taas oo ah, dadka la il daran hal cudur oo isdifaac ah ama mid kale laakiin wali doonaya inay sii wataan tacliinta sare waxaa la siiyaa deeqo waxbarasho si loogu dhiirrigeliyo oo looga caawiyo inay dib u dhigaan khidmadda waxbarashada.
Dad badan ayaa la nool cuduro, naafonimo, cilado, iyo wixii la mid ah iyadoo cuduradaasi ay noloshooda ka duwan yihiin kuwa caadiga ah. Cilladahaas awgood, waxay ku kooban yihiin inay qabtaan waxyaabo badan oo kuwa kale ay qaban karaan, nolosha, guud ahaan, uma sahlana iyaga.
Ujeedada ah in wax badan looga fududeeyo shakhsiyaadka la nool xanuun ama naafonimo, aasaaska hay'adaha samafalka, ururada, iyo wixii la mid ah ayaa loo sameeyay si loo caawiyo loona dhiirigaliyo hadba sida ay u awoodaan.
Tan waxaa ka mid ah kaalmooyinka maaliyadeed oo ku imaan kara nooc deeq waxbarasho ah si looga caawiyo inay gaaraan himilooyinkooda waxbarasho iyo taageerada anshaxa si ay ugu sii wataan nolosha.
Haa, dad badan oo la ildaran hal cudur, khalkhal, ama naafonimo waxay leeyihiin yoolal xirfadeed oo lagu gaari karo iyadoo la dhigto xarun sare sida jaamacad, koleej, ganacsi, ama iskuulo xirfadeed. Dadkani waa kuwa khaas ah sidaa darteed waxay leeyihiin deeqo waxbarasho oo si gaar ah loogu talagalay inay ku arkaan iyaga markay ku raad joogaan waxbarashadooda.
In kasta oo deeqaha waxbarasho qaarkood loogu talagalay dadka guud ahaan jirran, taas oo ah, dadka ku nool naafonimo, khalkhal, ama cudurro dabadheeraad ah, kuwa kale waxaa loogu talagalay dadka qaba arrin caafimaad oo gaar ah. Sida deeqda waxbarasho ee cudurada isdifaaca jirka, deeqaha cudurada dabadheeraad ah, deeqaha loogu talagalay dadka indhoolayaasha ah, deeqaha autism, iyo wixii la mid ah
Maqaalkani, si kastaba ha ahaatee, wuxuu bixiyaa faahfaahin ku saabsan deeqaha waxbarasho ee cudurada is-difaaca jirka, taas oo ah, kaliya dadka ku nool xaalad kasta oo caafimaad oo isdifaac ah ayaa dalban kara deeqaha waxbarasho ee halkan ku taxan.
Waa maxay cudurada isdifaaca jirka?
Cudurada isdifaaca jirka waa cudurada habka difaaca jirka uu u weeraro unugyada caafimaadka qaba. Noocyada ugu caansan ee cudurada isdifaaca jirka waa:
Jooniska ku-meel-gaar ah
Kuwani waa cudurro isdifaaca jirka ah oo haddii aad, nasiib daro, aad ku dhacdo mid ka mid ah cudurrada halkan ku taxan waxaad awoodi kartaa inaad u qalanto deeq waxbarasho oo kaa dhex arki karta hay'adda sare.
Marka laga reebo inaad yeelato cudur isdifaaca jirka, waxaa jira shuruudo gaar ah iyo shuruudaha u qalmida ee ay tahay inaad la kulanto si laguu siiyo deeq waxbarasho. Mid kasta oo ka mid ah deeqaha waxbarasho ee cudurada iswada jirka ayaa leh shuruudahan gaarka ah ee ay tahay inaad buuxiso si aad u kasbato abaalmarinta.
Iyadoo aan la sii ambaqaadin, aan sii wadno inaan wax ka barano deeqdan waxbarasho ee loogu talagalay cudurrada isdifaaca jirka iyo waxa ay u baahan tahay si loo kasbado.
1 Waa maxay cudurada isdifaaca jirka?
2 Deeqda waxbarasho ee ugu sareysa ee cudurada iswada
2.1 Aasaaska Anthony ee Jacaylka (ALL) Aasaaska
2.1.1 Deeq waxbarasho oo heer sare ah oo jaaliyadeed
2.1.2 Dagaalyahanada Autoimmune Abaalmarinta deeqda waxbarasho
2.2 Deeqda waxbarasho ee Anderson & Stowell
2.3 Deeqda waxbarasho ee Microsoft
2.4 Tani waa aniga deeqda waxbarasho
2.5 Sanduuqa deeqda waxbarasho ee EveryLife Foundation RAREis
2.6 Deeqda waxbarasho ee 'Hannah Bernard Memorial'
2.7 Sanduuqa Elaine Chapin
2.8 Deeqda Sharciga Buckfire
2.9 NBCUniversal Tony Coelho Deeq waxbarasho
2.11 Talo soo jeedin
Deeqda waxbarasho ee ugu sareysa ee cudurada iswada
Hoos waxaa ku yaal deeqaha waxbarasho ee cudurada iswada jirka:
Aasaaska Anthony ee Jacaylka (ALL) Aasaaska
Deeq waxbarasho oo heer sare ah oo jaaliyadeed
Dagaalyahanada Autoimmune Abaalmarinta deeqda waxbarasho
Deeqda waxbarasho ee Microsoft
Sanduuqa deeqda waxbarasho ee EveryLife Foundation RAREis
Deeqda waxbarasho ee 'Hannah Bernard Memorial'
Sanduuqa Elaine Chapin
Deeqda Sharciga Buckfire
NBCUniversal Tony Coelho Deeq waxbarasho
Aasaaska ALL waa urur aan faa'iido doon ahayn oo lagu aasaasay 2018 si loogu caawiyo dadka la il daran cudur isdifaaca jirka. Tan iyo markii la aasaasay 2018, hay'addu waxay siisay $ 18,200 lacag deeq ah ardayda jaamacadda ee la ildaran cudur isdifaaca jirka.
Aasaaska ALL wuxuu bixiyaa deeqo waxbarasho sanadkiiba marna wuxuu bixiyaa laba deeq waxbarasho oo loogu talagalay cudurada iswada jirka sanadkaan. Deeqaha waxbarasho waa:
Tani waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee loogu talagalay cudurrada is-difaaca jirka ee ay bixiso aasaaska ALL, waa abaalmarin $ 2,000 ah oo loogu talagalay in lagu bixiyo taageero maaliyadeed ardayda la xanuunsanaysa cudur is-difaaca jirka laakiin wali doonaya inay sii wataan waxbarashadooda.
Si aad u hesho abaalmarintan, waa inaad ka diiwaangashan tahay jaamacad la aqoonsan yahay oo raadineysa barnaamijka shahaadada koowaad ee bachelorka, firfircoon ka noqo bulshadaada, yeelato aqoon sare, iyo inaad sii wadato GPA isugeyn ah oo ah 3.0 ama ka sareeya.
Intaa waxaa sii dheer, waxaad qori doontaa qormo ku saabsan yoolalkaaga mustaqbalka, adeegyada aad ka qabatay kaniisaddaada ama bulshadaada, iyo sida helitaanka deeqdani kuu caawin doonto. Ugu dambeyntiina, soo gudbi qoraalkaaga ugu dambeeyay.
Xilliga kama dambaysta ah ee codsigu waa April 30, 2021
Tani waa mid kale oo ka mid ah deeqaha waxbarasho ee loogu talagalay cudurrada is-difaaca jirka ee sidoo kale ay bixiso aasaaska DHAMMAAN si looga caawiyo dadka ay ku dhacdo cudurka is-difaaca jirka inay helaan waxbarashada ay u baahan yihiin si ay u gaaraan himilooyinkooda xirfadeed.
Si aad u codsato deeqdan waxbarasho, waa inaad ka diiwaangashan tahay shahaadada koowaad ama barnaamijka qalin-jabinta ee jaamacad ama jaamacad ku taal Mareykanka oo la aqoonsan yahay ugu yaraan GPA ee 3.0. Kaqeybgalka bulshada iyo waxqabadka akadeemiyadeed ee xoogan ayaa sidoo kale shuruudaha looga baahan yahay si loogu guuleysto deeqdan waxbarasho.
Deeqda waxbarasho ee Anderson & Stowell waxaa bixiya Bella Soul, oo ah hay'ad samafal dadweyne oo loo aasaasay inay awood u siiso ardayda la ildaran cudurada iswada, naafonimada jireed, cilladaha, iwm iyada oo loo marayo deeqo waxbarasho iyo taageero niyadeed
Deeqdani waa mid guud oo loogu talagalay dadka jiran waxayna si fiican ugu gudubtaa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee cudurada iswada. Codsadeyaashu waa inay iska diiwaangeliyaan barnaamij waqti-buuxa ah ama waqti-dhiman ah oo laga helo kulliyad la aqoonsan yahay oo aysan ku jirin tijaabada tacliinta.
Intaa waxaa sii dheer, codsadayaashu waa inay sidoo kale qoraan labo bog oo sheeko labo waji leh oo ku saabsan kor u kaca iyo hoos u dhaca ku noolaanshaha cudurka iswada.
Qoraalkaaga, ku dar jawaabaha su'aalaha soo socda: “Maxaad talo u sheegi lahayd qof la halgama isla cudur ama cillad? “Maxay yihiin qaar ka mid ah farsamooyinka kaa caawinaya inaad horay u socoto oo aad nolol caafimaad leh maskax ahaan iyo jir ahaanba u noolaato?
Si aad u dalbato, emayl caddayn u qorista Bella Soul, qoraalka looma baahna GPA sidoo kale waa la tixgelin doonaa. Buuxi magacaaga, sanadkaaga, GPA-ga, jaamacadda, iyo cudurka / khalkhalka iyo email ugu dir sstrader@wisc.edu.
Qadarka deeqda waxbarasho waa $ 400 oo leh ugu dambeyn Ogosto 30, 2021.
Sida iska cad, qaar ka mid ah cudurrada isdifaaca jirka ayaa sababa naafonimo, iyo haddii lagugu helo mid oo aad weli rabto inaad ku sii wadato waxbarashadaada machad sare waad dalban kartaa deeqdan waxbarasho.
Microsoft - shirkadda tiknoolajiyada weyn - waxay u abuurtaa deeqdan waxbarasho si loo xoojiyo loona awoodo dadka naafada ah ee ay sababaan cudurrada isdifaaca jirka. Tani waxay ka dhigeysaa deeqda waxbarasho ee 'Microsoft DisAbility Scholarship' deeqda waxbarasho ee loogu talagalay cudurrada isdifaaca jirka waxayna qiimeysaa $ 5,000.
The $ 5,000 deeq waxbarasho ayaa la bixiyaa sanadkiiba haddii haddii qofka qaata uu ku adkeysto joogitaan wanaagsan oo waxbarasho waxaa loo cusbooneysiin karaa seddex sano oo dheeri ah. Marka, deeqdani waxay leedahay wadarta guud ee $ 20,000.
Deeqdan waxaa la siiyaa arday dhigata dugsiga sare sannadaha ugu dambeeya ee naafonimada ka dhasha cudurrada isdifaaca jirka. Codsaduhu waa inuu dalbaday ama ku saabsan inuu dalbado hay'ad sare oo la aqoonsan yahay si uu ugu sii wado xirfad farsamada.
Intaa waxaa sii dheer, codsaduhu waa inuu sidoo kale haystaa ugu yaraan CGPA ee 3.0 ama ka sareeya, muujiya awoodaha hoggaamineed iyo baahida dhaqaale. Dukumiintiyada kale ee looga baahan yahay codsigu waa saddex qoraal, dib-u-bilaabid, qoraal-tacliimeed, iyo laba warqadood oo talo-bixin ah.
Codso deeqda waxbarasho halkan
Tani waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee loogu talagalay cudurrada is-difaaca jirka ee loogu talagalay ardayda hadda la xanuunsan ama ka soo kabsaday Alopecia. Codsadeyaashu waa inay ku jiraan dugsiga sare sannadooda ugu dambeysa waqtiga arjiga iyagoo ujeedkoodu yahay inay sii wataan waxbarashadooda xarun sare oo laga aqoonsan yahay Mareykanka.
Qoraal shaqsiyeed oo sharraxaya khibradaada adoo leh alopecia (looma baahna ugu badnaan ama ereyada ugu yar).
Mu'asasada 'EveryLife Foundation' waxaa loo sameeyay inay ka caawiso dadka uu ku dhacay cudur naadir ah iyadoo lagu taageerayo himilooyinkooda shaqo iyadoo la siinayo kaalmooyin deeq waxbarasho ah.
Maxay tani uga mid tahay liiska deeqaha waxbarasho ee cudurada iswada?
Waa hagaag, qaar ka mid ah cudurrada isdifaaca jirka ayaa ka mid ah cudurrada naadir ka ah qaarkood sida cudurka macaanka Nooca 1aad. Sidoo kale waa inaad sameysaa cilmi baaris adiga kuu gaar ah oo ku saabsan cudurada dhifka ah ee isdifaaca jirka isla markaana haddii jirradaada ay ku dhacdo iyaga, waxaad sii wadi kartaa inaad codsato deeqdan waxbarasho.
Codsadeyaashu waa inay ka weynaadaan 17 sano, deganaanshaha Mareykanka, oo laga helaa cudur naadir ah oo ku saabsan nooca cudurada isdifaaca jirka. Deeqaha ayaa la bixiyaa sanadkiiba waxaana lagu qiimeeyaa $ 5,000 midkiiba ilaa 35 qof.
Codsadeyaashu waa inay qorsheeyaan inay is qoraan ama horeyba uga diiwaangashanaadaan hay'ad sare oo laga aqoonsan yahay Mareykanka si ay u sii wataan barnaamijka shahaadada koowaad ama qalin-jabinta. Goobaha waxbarashada waxaa ka mid ah jaamacado, kulliyado, iyo iskuulo xirfadeed ama xirfadeed.
Shuruudaha kale ee dheeriga ah waxaa ka mid ah buundooyinka hadda la soo qaatay iyo ogaanshaha cudurkaaga dhifka ah ee jirka, qormo sharraxaysa yoolalkaaga iyo sida helitaanka deeq-lacageedku kaaga caawin doono inaad iyaga gaarto.
Deeqaha waxaa lagu bixiyaa iyada oo ku saleysan qoraalada, awoodaha hogaaminta, ka qeyb qaadashada howlaha iskuulka iyo bulshada, khibrada shaqo, waxqabadka tacliimeed, iyo baahida dhaqaale.
The Hannah Bernard Memorial Scholarship waa deeq waxbarasho oo loogu talagalay ardayda la xanuunsaneysa xaaladaha adag ee xanuunka sida 'Myositis' iyo cudur kasta oo kale oo isdifaac ah oo loo qoondeeyay xaalad xanuun adag.
Sida muuqata, qaar ka mid ah cudurrada is-difaaca jirka ayaa sidoo kale ah xaalado xanuun oo adag oo haddii aad qabtid cudur isdifaaca jirka ah oo ku dhaca qaybtaan markaa waa inaad dalbataa deeqdan waxbarasho.
Sidee ku ogaaneysaa in dhibaatadaada caafimaad ee jirka ay ku dhex dhacdo xaaladaha xanuunka adag?
Hagaag, taasi way fududahay. Waad weydiin kartaa dhakhtarkaaga ama waxaad sameyn kartaa baaritaankaaga, Google marwalba wuu kula jiraa adiga.
Marka, haddii aad ka mid noqoto qaybta oo aad higsaneysid inaad ku sii wadatid waxbarasho dugsiga sare, koleej, jaamacad, ama barashada internetka waxaad dalban kartaa deeqdan $ 600.
Waxaad si fudud ugu baahan tahay inaad buuxiso codsi iyo qormooyin ka kooban 500 oo erey ama wax ka yar ku sharraxa naftaada iyo sida aad ugu nooshahay noloshaada ugu fiican inkasta oo xanuun joogto ah iyo sidoo kale sida helitaanka deeqdani ay kaa caawin doonto inaad gaarto hadafyadaada waxbarasho.
Sidaa darteed deeqda waxbarasho ee 'Hannah Bernard Memorial' waxay u gudubtaa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee cudurada iswada jirka.
Sanduuqa Elaine Chapin waxaa loo aasaasay si loo bixiyo lacag lagu taageerayo tacliinta sare ee ardayda ay saameeyeen cudurka 'sclerosis', si toos ah ama xubin qoys ah. Kaliya dadka degan Saint Louis iyo gobolka Missouri ee dalka Mareykanka ayaa u furan inay codsadaan deeqdan waxbarasho.
Codsadeyaashu waa inay isqortaan ama qorsheeyaan inay iska qoraan hay'ad sare oo ku taal Mareykanka, dadka qaata waxaa lagu xushaa iyadoo loo eegayo baahida dhaqaale, waxqabadka tacliinta, iyo sida cudurka sclerosis badan uu noloshooda u saameeyay.
Maaddaama cudurka 'sclerosis multiple' uu yahay xaalad caafimaad oo isdifaac ah, Sanduuqa 'Elaine Chapin Fund' ayaa hubaal u ah inuu u gudbo mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee cudurrada is-difaaca jirka.
Tani waa deeq waxbarasho oo loogu talagalay dadka qaba naafonimo, cillad, jirro joogto ah, iyo dhammaan noocyada xaaladaha caafimaad ee isdifaaca jirka. Deeqda waxbarasho ee 'Buckfire Law Law' waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee loogu talagalay cudurrada isdifaaca maaddaama ay ka caawineyso bixinta gargaar lacageed dadka ay dhibaatadu ka soo gaarto arrimaha caafimaadka isla markaana doonaya inay waxbarashadooda ku sii wataan hay'ad sare.
Deeqdani waa abaalmarin $ 1,000 ah oo aad ku guuleysato waa inaad buuxisaa shuruudaha u-qalmitaanka ee soo socda:
Waa inuu noqdaa muwaadin ama degane rasmi ah oo Mareykan ah oo ka diiwaangashan hay'ad aqoonsan oo dugsi sare ah oo Mareykan ah
Aad leedahay naafonimo ama xanuun laga helay takhtar takhasus leh.
Ku dhammee ugu yaraan hal semester xaruntaada martigeliyaha.
Waxaa loogu magac daray Tony Coelho - wakiil hore oo Mareykan ah - waxaana loogu talagalay in deeq waxbarasho la siiyo dadka la il daran arrimaha caafimaad ee jirka.
Deeqdan ayaa la siiyaa sideed shahaadada hoose iyo ardayda qalin-jabisa ee ka diiwaangashan kuleejo ama jaamacad la aqoonsan yahay si ay ugu sii wataan xirfad isgaarsiinta, warbaahinta, ama qaybta madadaalada.
Arday kasta wuxuu heli doonaa wadar ahaan $ 5,625 si looga caawiyo daboolida kharashka waxbarashada ee ay hadda dhigato dugsiga sare.
Ma xiiseyneysaa inaad codsato? La kulan shuruudaha u qalmitaanka soo socda:
Codsadeyaashu waa inay hadda ka diiwaangashan yihiin shahaadada koowaad ama ardayda qalin-jabisa jaamacad ama jaamacad la aqoonsan yahay oo ku taal Mareykanka illaa simistarka dayrta ee sannad-dugsiyeedka.
Waa inaad isku aqoonsataa shaqsi qaba cudur isdifaaca jirka
Waa inuu daneeyaa raacitaanka shahaadada xiriirka, warbaahinta, ama warshadaha madadaalada. Dhammaan waaweyn ayaa lagu soo dhaweynayaa inay codsadaan.
In kasta oo aan looga baahnayn inaad noqoto muwaadin Mareykan ah si aad ugu qalanto deeqdan waxbarasho, haddana waa inaad hadda iska diiwaangelisaa kulleejo ama jaamacad ku taal Mareykanka.
Xusuusnow, deeqdan waxbarasho waxaa la bixiyaa sanad walba haddii aadan awoodin inaad la kulanto ama aadan ku guuleysan sannadka hadda waxaad marwalba hubin kartaa sanadka soo socda oo aad dalban kartaa.
Dukumiintiyada kale ee loogu talagalay barnaamijka tooska ah ee NBCUniversal Tony Coelho Media Scholarship waa saddex su'aalood oo maqaal ah, dib u bilaabid, qoraallo aan rasmi ahayn, iyo warqad talo bixin ah.
Tani waxay soo afjareysaa deeqaha waxbarasho ee cudurada iswada jirka iyo faahfaahinta sida aad u codsan karto iyaga. Codso deeqdan waxbarasho goor hore si aad ula kulanto waqtiga kama dambaysta ah sidoo kale waxaad dalban kartaa in ka badan hal si loo kordhiyo fursadahaaga.
Si aad u sii kordhiso fursadahaaga, waxaad sidoo kale codsan kartaa deeqaha waxbarasho ee caadiga ah gaar ahaan nooca si buuxda loo maalgeliyo ee loogu talagalay lacag caddaan ah oo deeq waxbarasho ah. In kasta oo deeqaha waxbarasho guud ay leeyihiin shuruudo aad u sarreeya haddii aad la kulmi karto ka dib markaa u tag.
Barashada Hagaha Dibadda Deeqaha Yurub Deeq waxbarasho oo buuxa Dibedda Ku Baro Iyada oo Deeq waxbarasho la siinayo
deeqaha waxbarasho ee cudurada iswada
Previous Post:13 Koorsooyin Real Estate ah oo Bilaash ah oo wata Shahaadooyin
Post Next:Top 10 Jaamacadaha ugu Raqiisan Australia oo leh Kharashyadooda Waxbarashada
Pingback: 10ka Dugsi ee ugu Fiican Down Syndrome ee Florida 2021